विप्लव मंसिर ८ गते सार्वजनिक हुँदै, कार्यक्रममा वैद्यलाई निम्तो ! - Everest Dainik - News from Nepal
विप्लव मंसिर ८ गते सार्वजनिक हुँदै, कार्यक्रममा वैद्यलाई निम्तो !
काठमाडौं, कार्तिक १३ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आगामी मंसिर ८ मा काठमाडौंमा जनसभा गर्दै छ । भूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको आरोप लागेका सो पार्टीले मंसिरमा खुलामञ्चमा जनसभा गर्न लागेको हो ।
सभामा नेकपाले मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलाई आमन्त्रण गर्ने भएको छ। सो सभामा पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत नेताहरुले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
ट्याग्स: Mohon baidhye, Netrabikram chand